Isingeniso Somshini weLathe
Umshini we-Lathe wuhlobo lwethuluzi lomshini elisetshenziswa kakhulu ekwenzeni imishini. Umshini we-lathe wenza cishe i-20% - 35% yenani eliphelele lamathuluzi omshini. Icubungula ikakhulukazi izindawo ezijikelezayo ezijikelezayo (amasilinda angaphakathi nangaphandle, izakhiwo eziyindilinga, izakhiwo ezijikelezayo ezimile, njll.) Kanye nezindawo zokugcina zemizimba ezijikelezayo. Amanye ama-lathes nawo angacubungula izindawo ezifakiwe.
Amathuluzi asetshenziswe ku-lathe ikakhulukazi amathuluzi we-lathe. Zingasetshenziselwa ukucubungula izimbobo ezinjengezokuzivivinya, zokuzivivinya kabusha, imimese yokulahla, kanye namathuluzi afakiwe afana nompompi namazinyo epuleti.
Kuvundlileingxenyeni yensimbiinobuchwepheshe obuningi. Ingacubungula izinhlobo eziningi zomhlaba, njengesilinda sangaphakathi nangaphandle, isigaxa, inkatho yendandatho, okwakha ubuso obujikelezayo, indiza yokuphela nezintambo ezahlukahlukene. Ingabuye ibhole, ikhulise, iqhathanise izimbobo ne-knurl. Ubuso obujwayelekile ukuthi i-lathe evundlile ingacubungulwa buvezwa esithombeni.
Ukunyakaza okukhulu kweisikhungo senjiniukunyakaza kokujikeleza kokuphotha, futhi ukunyakaza kokuphakelayo kungukuhamba okuqondile kwethuluzi. Okuphakelayo kuvame ukuvezwa ngokuhamba kwethuluzi lokuphotha ngakunye, ku-M / R. Lapho kuvulwa imicu, kunesinyakaziso esisodwa kuphela esiyinhlanganisela, okuwukuthi ukunyakaza kwesikulufu, okungabola kube ukunyakaza kokujikeleza kokuphotha nokuhamba kwamathuluzi. Uma ufuna ukucutshungulwa kwentambo ngokushesha, noma unenani elikhulu lezinto zokusebenza okumele zikhiqizwe ngobuningi ngaleso sikhathiCNC ipayipi ngentambo lathekuyisinqumo esihle. Ngaphezu kwalokho, kukhona ukunyakaza okudingekayo okusizayo ku-lathe. Isibonelo, ukuze kucutshungulwe uboya ngosayizi odingekayo, i-lathe kufanele futhi ibe nokunyakaza kokusika (ukunyakaza kokuvama kuvame ukuqondiswa ekuqondisweni kokunyakaza kokuphakelayo, futhi isisebenzi sihambisa umnikazi wethuluzi ngesandla ku-lathe evundlile) . Amanye ama-lathes nawo anokuhamba okusheshayo kwe-longitudinal kanye ne-lateral kwesiphathi sethuluzi.
Ipharamitha eyinhloko ye-lathe enezingqimba ubukhulu obukhulu bokujikeleza komsebenzi osebenza embhedeni, kanti okwesibili ubude obukhulu bomsebenzi. Le mingcele emibili ikhombisa ubukhulu bomkhawulo wensimbi yokusebenza eyenziwe ngomshini, futhi ibuye ibonise usayizi wethuluzi lomshini, ngoba imingcele eyinhloko inquma ukuphakama kwe-axis yethini kusukela kusitimela somhlahlandlela womzimba we-lathe, kanye imingcele yesibili eyinhloko inquma ubude bombhede we-lathe.
I-lathe evundlile icubungula izinhlobo ezahlukahlukene ze-asi, imikhono kanye nezingxenye zediski. Isimo sayo siboniswa esithombeni, futhi iqembu laso eliyinhloko liqukethe izingxenye ezintathu.
Izingxenye zifaka ibhokisi lokuphotha, umnikazi wamathuluzi, umsila, ibhokisi lokuphakelayo, ibhokisi lesilayidi nombhede, njll.
Umumo womugqa ovundlile
Isihloko sekhanda esingu-1
2 umnikazi wommese
5 imilenze yombhede wangakwesokudla
Ibha yokukhanya engu-6
Ibhokisi le-8 elislayida
9 umlenze wesobunxele
Ibhokisi lokudla eli-10
Izindlela ezi-11 zokulengisa amasondo
Isigxobo sekhanda simiswe ekugcineni kombhede kwesobunxele, futhi kushaft enkulu kanye nendlela yokudlulisa isivinini eguquguqukayo efakwe ngaphakathi, kuthi okokusebenza kuboshelwe ekugcineni kwengaphambili lokuphotha ngokusebenzisa i-chuck. Umsebenzi we-headstock ukuxhasa ishaft enkulu futhi udlulise amandla kushaft enkulu ngokusebenzisa indlela yokudlulisa isivinini esiguqukayo, ukuze ishafula elikhulu lishayele umsebenzi wokuzungezisa ngejubane elibekiwe ukuze kutholakale ukunyakaza okukhulu.
2. Umnikazi wamathuluzi
Isiphathi sethuluzi sibekwe kujantshi wesibambi samathuluzi futhi singahanjiswa ubude besitimela esiqondisayo. Ingxenye yesiphathi sethuluzi inezingqimba eziningana zabaphethe amathuluzi. Umsebenzi wawo ukucindezela ithuluzi lokujika lokunyakaza kwe-longitudinal, lateral noma i-oblique feed.
3. Umsila wensila
I-tailstock ibekwe kujantshi ophethe ithuluzi lombhede futhi ungalungiswa ubude besitimela. Umsebenzi wawo ukusekela ubuciko bokusebenza obude ngethiphu ephezulu, noma ukufaka ithuluzi lokuchofoza emgodini njenge-drill bit noma ummese wokulahla imishini yemigodi. Faka kancane on the tailstock, The workpiece kungenziwa yamba ukwenza umsebenzi lathe njengoba osabalalayo imishini umshinilapha.
Umbhede ubekwe emilenzeni yomlenze wesobunxele nangakwesokudla nemisebenzi yokuxhasa izingxenye eziyinhloko nokugcina indawo enembile yesihlobo noma i-trajectory ngesikhathi sokusebenza.
5. Ibhokisi lesilayidi
Ibhokisi lesilayidi lilungiswe ezansi kwesiphathi sethuluzi ukuhambisa isibambi sethuluzi ndawonye esiqondisweni sesikhathi eside. Indima yalo ukudlulisa ibhokisi lokuphakela ngebha yokukhanya.
Ukunyakaza okuvela (noma isikulufa sokuhola) kudluliselwa kumnikazi wethuluzi, kuvumela umphathi wethuluzi ukuthi afinyelele okuphakelayo kwe-longitudinal, okuphakelayo kwe-lateral, ukunyakaza okusheshayo noma ukuchusha. Induku yokudlala ifakwe izinto zokuthokozisa ezahlukahlukene noma izinkinobho.
6. Ibhokisi lokuphakelayo
Ibhokisi lokuphakelayo ligxile ohlangothini lwesobunxele embhedeni, futhi linendlela yokuphakelayo yokushintsha indlela yokushintsha okuphakelayo kokuphakelayo kwezimoto noma ukuhola kwentambo eyenziwe ngomshini.
Izinyathelo zokusebenza kwe-Lathe
1. Ukuhlolwa ngaphambi kokushayela
1.1 Gcwalisa umdwebo wegrisi womshini ngamafutha afanele.
1.2 Hlola izindawo zikagesi zomnyango ngamunye, isibambo, izingxenye zokudlulisa, ukuvikela nokukhawulela amadivayisi aphelele futhi athembekile.
1.3 Igiya ngalinye kufanele libe lapho limi khona, nebhande kufanele liqiniswe.
1.4 Indawo yombhede ayivunyelwe ukugcina ngqo izinto zensimbi ukugwema ukulimala komphezulu wombhede.
1.5 Ucezu lomsebenzi oluzocutshungulwa, alukho isihlabathi esinodaka, oluvimbela isihlabathi sodaka ukuthi singaweli enqoleni, futhi sigaye ujantshi oyisiqondisi.
1.6 Ngaphambi kokuthi umsebenzi uboshwe, ukuvivinya okungenalutho kwe-lathe kufanele kwenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi konke kujwayelekile ngaphambi kokuba ulayisho lisebenze.
2.1 Lapho indawo yokusebenza ilungile, qala ipompo lamafutha okugcoba kuqala, ukuze ingcindezi kawoyela ifinyelele kuzidingo zethuluzi lomshini ngaphambi kokuqala.
2.2 Lapho ulungisa ophethe izinto zokushintshanisa, lapho kulungiswa isondo, amandla kufanele anqanyulwe. Ngemuva kokulungiswa, wonke amabhawodi kufanele aqiniswe, isikrufu kufanele sisuswe ngesikhathi, kuthi okokusebenza kuthathwe ukuze kusebenze isilingo.
2.3 Ngokushesha ngemuva kokulayisha nokukhipha okokusebenza, susa isikrufu esintantayo sesikrufu se-chuck nensimbi yokusebenza.
2.4 Isibambo somsila nesihlalu sethuluzi lomshini kufanele silungiswe endaweni efanele ngokuya ngezidingo zokucubungula, futhi siqiniswe noma siboshwe.
2.5 I-workpiece, ithuluzi kanye nesimbembembe kufanele kufakwe ngokuvikelekile. Ithuluzi lamandla entanta kumele linwebe ingxenye yommese ku-workpiece ukuqala umshini.
2.6 Uma usebenzisa ifreyimu yesikhungo noma umphathi wamathuluzi, isikhungo kufanele silungiswe futhi sithanjiswe kahle futhi sisekelwe.
2.7 Lapho kucutshungulwa izinto ezinde, ingxenye eqhamukayo engemuva kokuphotha akufanele ibe yinde kakhulu. Uma yinde kakhulu, ifreyimu yokulayisha kufanele ifakwe futhi uphawu lwengozi kufanele luxhunywe.
2.8 Lapho udla, ummese kufanele usondele emsebenzini ukugwema ukushayisana; ijubane lenqola kufanele lilingane. Lapho ushintsha ithuluzi, ithuluzi kumele libe sebangeni elifanele ukusuka kokwenziwa komsebenzi.
2.9 Ithuluzi lokusika kufanele liboshwe, futhi ubude bethuluzi lokujika ngokuvamile alikho ngaphezu kwezikhathi ezi-2,5 ubukhulu bommese.
2.1.0 Lapho kusetjenziswa izingxenye ze-eccentric, kuyadingeka ukuthi kube ne-counterweight efanelekile ukulinganisa isikhungo samandla adonsela phansi we-chuck futhi ijubane lemoto kufanele lifanele.
2.1.1. Uma ikhadi lingaphezu komsebenzi ngaphandle kwe-fuselage, kufanele kuthathwe izinyathelo zokuzivikela.
2.1.2 Ukulungiswa kokusetha kwamathuluzi kumele kuhambe kancane. Lapho ithiphu yethuluzi likude ngama-40-60 mm ukusuka endaweni yokucubungula ngocingo, kufanele kusetshenziswe okuphakelayo okwenziwa ngesandla noma kokusebenza esikhundleni sefidi eqondile.
2.1.3 Lapho kwenziwa umsebenzi wokuhlobisa ifayili, ophethe ithuluzi kufanele ahlehliselwe endaweni ephephile. Opharetha kufanele abhekane ne-chuck ngesandla sokudla ngaphambili nangakwesobunxele ngemuva. I-workpiece ene-groove yokhiye ebusweni ayivunyelwe ukucubungulwa ngefayela.
2.1.4 Lapho umbuthano wangaphandle womsebenzi upholishiwe ngendwangu elukhuni, u-opharetha uzokhanyisa izinhlangothi zombili zendwangu elicasulayo ngokuma okuchazwe esihlokweni esingenhla. Ungasebenzisi umunwe ukubamba indwangu elicasulayo ukupholisha imbobo yangaphakathi.
2.1.5 Lapho ithuluzi lihanjiswa ngokuzenzakalela, ophethe ithuluzi elincane kufanele alungiswe ukuze aflashe ngesisekelo ukuvimbela isisekelo ekushayeni i-chuck.
2.1.6 Uma usika imisebenzi yokusebenza emikhulu noma esindayo noma okokusebenza, isabelo semishini esanele kufanele sishiywe.
3.1 Vala amandla bese ususa okokusebenza.
3.2 Isibambo ngasinye sidilikelwa phansi, futhi amathuluzi ayahlanzwa futhi ahlanzwe.
3.3 Hlola isimo sedivayisi ngayinye yokuvikela.